Signal Processing / Digital Signal Processing နဲ့ပတ်သက်သမျှ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Signal Processing / Digital Signal Processing နဲ့ပတ်သက်သမျှ
View Full Version : Signal Processing / Digital Signal Processing နဲ့ပတ်သက်သမျှ
ကျွန်တော် က signal processing ကို အခုမှ စတင် လေ့လာနေတာ ဆိုတော့ အခြေခံလောက်ဘဲ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိသလောက်နဲ့အစဖော် ပေးလိုက်ရင် ကျွန်တော့ထက် signal processing အကြောင်း ကို ပိုသိ နားလည်တဲ့ အကို အမ တွေက ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင် ဖြည့်ဆည်း ဆွေးနွေးသွားမယ် စဉ်းစားမိပြီး ဒီနေရာမှာ နဲနဲ အစဖော် ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာရေးရ မှန်း မသိလေတော့ ခေါင်းထဲ မှာ ရှိတာတွေ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာတွေကို ဘဲ ဆက်စပ်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။
Signal processing ဆိုတဲ့ အတိုင်း signal တွေကို process လုပ်တာပေါ့ ;D ဘယ်လို process လုပ်လဲဆိုတော့ ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့ပြောရရင် CIA က တလျှို တစ်ယောက် စကား ပြောနေတာကို အဝေးကနေ အသံဖမ်းပြီး နားထောင် ချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ တလျှို ရဲ့အသံက သူ့ဘေးနားက ခွေးဟောင်သံရော ကြောင်အော်သံရော ဂီတာတီးသံရော သီချင်း ဆိုသံ အသံပေါင်းစုံ နဲ့ရောနေတဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ တလျှို ဘာပြောနေတယ် ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း မကြား ရဘူးဖြစ်နေတယ်။
from here (http://www.mathworks.com/products/fixed/demos.html?file=/products/demos/shipping/fixedpoint/fi_radix2fft_demo.html)
ပုံတွေကတော့ ကျွန်တော် မဆွဲချင်လို့အင်တာနက်ကနေဘဲ ရှာဖွေတင်ထားတာပါ။
အပေါ်က ပုံက ဥပမာ အနေနဲ့ပြောရရင် အသံဖမ်း စက်ကနေ ဖမ်းယူ ရရှိတဲ့ အသံလှိုင်းက (time domain) အတွင်းမှာ အချိန် (time) နဲ့အမျှ လိုက်ပြီး ပြောင်းနေတဲ့ အသံပေါင်းစုံ စုပေါင်းထားတဲ့ အသံအား (amplitude/voltage) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တော့ တလျှို တစ်ယောက်တည်း ရဲ့အသံ ကို အခုလို ရောသော နေတဲ့ အသံ ပေါင်း စုံ က နေ ခွဲထုတ်ဖို့ အတွက် signal processing ကို သုံးရပါတယ်။ ဒီ link နေရာမှာ (click me here) (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,2709.0.html) ကို William Paul ပြောပြထားသလိုဘဲ အရာဝထ္ထုတိုင်း လူတိုင်း မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် frequency ရှိတဲ့ အတွက် ရောထွေးနေတဲ့ အသံ ပေါင်းစုံထဲက မလိုချင်တဲ့ ခွေးဟောင်သံတွေ ကြောင်အော်သံတွေ ဂီတာသံ တွေကို သူတို့ ရဲ့frequency အလိုက် ခွဲထုတ်လိုက်ရင် နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ တလျှို ရဲ့အသံတစ်ခုတည်း ဘဲ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အသံတွေကို frequency အလိုက်ခွဲထုတ်ဖို့ ဆိုရင် ဟို အပေါ်က ပုံထဲကလို အချိန်နဲ့လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ အသံ signal ကို time domain ကနေ ဒုတိယ wave form လိုမျိုး frequency နဲ့လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ အသံ signal (in frequency domain) အဖြစ်ပြောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Fourier series/transform က အသုံးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
from here (http://ict.udlap.mx/people/oleg/docencia/IMAGENES/chapter2/image_232_IS548.html)
Fourier ရဲ့သီအိုရီ က လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဘယ်လို analog signal မျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် signal waveform လှိုင်းတစ်ခုက fundamental frequency မတူတဲ့ အရေအတွက် တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ sinusoidal wave တွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်ထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ အပေါ်က ပုံမှာလိုဘဲ ဘယ်ဖက်မှာ frequency မတူတဲ့ sin wave တွေ ပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ညာဖက်က signal အသစ်တွေကို ဖွဲ့ စည်းနိုင်ပါတယ်။ နောက် အောက်ဆုံးက ပုံလိုဘဲ frequency မတူတဲ့ sin wave တွေ အများကြီး ပေါင်းပြီးတော့ square wave တစ်ခုကို ဖန်တီး နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို တလျှိုရဲ့အသံတစ်ခုတည်း ကိုလိုချင်ရင် အသံပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေတဲ့ (time domain ထဲက) signal ကို fourier နည်းနဲ့(frequency domain ထဲမှာ) frequency မတူတဲ့ sin wave တွေ အများကြီး အဖြစ်နဲ့ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး အဲ့ဒီ frequency မတူတဲ့ sin wave တွေထဲကမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ frequency ရှိတဲ့ sin wave တွေကိုဘဲ ရွေးထုတ် ပြန်ပေါင်းပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ တလျှိုရဲ့စကားသံ တစ်ခုတည်းကို ပြန်တည်ဆောက် လို့ ရပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော် စဉ်းစား မိတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့windows media player တို့cd/mp3 player တွေမှာ ပါတဲ့ equalizer ဆိုတာလည်း ဒီသဘော မျိုးပါဘဲ။ သီချင်းတစ်ခုမှာ ပါတဲ့ ဂစ်တာသံတွေ keyboard သံ bass သံတွေရဲ့မတူညီတဲ့ frequency ကို လိုက်ပြီး ကိုယ်လိုချင် တဲ့ frequency တစ်ခုတည်းကိုဘဲ အတိုး အကျယ် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သီချင်းသံရဲ့bass/treble/vocal ကို လိုသလို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
သူလျှို ဥပမာ ကို ကြည့်မယ်ဆို ရင် ဥပမာ ဒီအပေါ်က ပုံ ၃ ပုံမှာ ပထမ ပုံ မှာ ပြထားတဲ့ square wave (time domain) ကို အသံတွေ အားလုံး ရောယှက်နေတဲ့ အသံဖမ်းစက်နဲ့ဖမ်း ထားတဲ့ signal လို့ သဘောထားပါမယ်။ သူ့ဘေးက ပုံကတော့ အဲ့ဒီ signal ကို fourier series နည်းနဲ့sinusoidal signal တွေ ခွဲထုတ်ထားတဲ့ပုံ (time domain) ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အသံတွေ အားလုံး ယောယှက်နေ တဲ့ signal ကိုမှ fourier transform နည်းနဲ့frequency domain ထဲကို ပြောင်းလဲ ကြည့်ပါတယ်။ ဒုတိယ ပုံထဲမှာ ပြထားသလို frequency domain ထဲမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် frequency အလိုက် အရာ ၀တ္တု လူ သတ္တ၀ါ တွေဟာ အုပ်စု ကွဲသွားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကွဲနေတဲ့ အုပ်စုထဲကမှ filter သုံးပြီး သူလျှို ရဲ့frequency တစ်ခုတည်း ကိုဘဲ စစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အခါ တတိယ ပုံထဲမှာ ပြထားသလို သူလျှို ရဲ့အသံ တစ်ခုတည်း ကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ inverse fourier transform သုံးပြီး time domain signal ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်လျှင် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ သူလျှို ရဲ့စကားသံ တစ်ခုတည်း ကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ digital signal processing က ဘယ်လိုနေရာယူလာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့ အတိုင်း digital နည်းပညာရဲ့အရည်အသွေး ကောင်းမှု နေရာယူမှု သိုသိပ်သေးငယ် မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ digital ဆိုတဲ့ အတိုင်း နံပါတ်တွေ နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် electronic circuit တွေ မလိုတော့ဘဲ signal တွေကို computer ပေါ်မှာ software တွေသုံးပြီး လိုသလို တည်ဆောက်ပြုပြင် လာနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ခေတ်က သုံးတဲ့ ကတ်ဆက် တိပ်ခွေ (analog) တွေ နဲ့အခု ခေတ်သုံး cd/mp3 player (digital) တွေကို နှိုင်ယှဉ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ လျှပ်စစ်သံလိုက် နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကတ်ဆက် တိပ်ခွေ ရဲ့တိပ်သားပြားတွေပေါ်က သီချင်းတွေဟာ သုံးတာကြာလာတာနဲ့အမျှ့ တိပ်သား ပျက်စီးလားပြီး သီချင်း အသံလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်လာပါတယ်။ digital နည်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကတော့ နံပါတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့် နံပါတ်တွေက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု မရှိနိုင်တဲ့ အတွက် သီချင်း အသံကလည်း ဘယ်တော့မှ အရည်အသွေး ကျသွားစရာမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီလို analog signal ကို digital signal အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ နေရာမှာ signal processing က အသုံးဝင်လာပြန်ပါတယ်။
Analog signal ဆိုတာက သူ့amplitude က အကန့် အသတ် မရှိတဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲ continuous signal ဖြစ်တဲ့ အတွက် digital signal လိုမျိုး ကန့် သတ် ထားတဲ့ အချိန် အမှတ်တွေ အလိုက်သာ amplitude ပြောင်းလဲတဲ့ discrete signal တစ်ခုရဖို့ ဆိုရင် sampling theorem ကိုသုံးပြီး continuous signal ကနေ discrete signal ကို အရင် ပြောင်းလဲရပါတယ်။ sampling လုပ်တယ်ဆိုတာက (အမြီးစားတာ မဟုတ်ပါ ) :) ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အမှတ်လေး တွေမှာ ဘဲရှိတဲ့ data points (amplitude) တွေ ကိုဘဲ စိစစ်ရွေးချယ်ပြီး ပုံစံ ဆင်တူပြီး အရွယ်အစား ပိုသေးငယ်တဲ့ signal တစ်ခု ပြန်တည်ဆောက် ခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအောက်က waveform ၂ ခု ကိုကြည့်ရင် အပေါ်က waveform က အချိန်အကန့် အသတ်မရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ continuous signal ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ အောက်က waveform ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အမှတ်တွေမှာသာ လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ sampling လုပ်ထားတဲ့ discrete waveform ဖြစ်ပါတယ်။
from here (http://www.wescottdesign.com/articles/Sampling/sampling.html)
ဒီ အပေါ်က ပုံကတော့ signal processing စာအုပ်တိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ ရတတ်တဲ့ Playboy star Lena ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ အတိုင်း sampling လုပ်လိုက်ရင် နဂို ပုံရဲ့size ထက် အရွယ်ငယ်ပြီး ပုံစံ ဆင်တူတဲ့ ပုံကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ picture image ပုံတစ်ခုဟာ သေးငယ်တဲ့ pixel အရောင် အစက် လေးပေါင်း များစွာ နဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ အစက် လေးတွေ အားလုံးကို မယူဘဲ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (x,y position) နေရာမှာ ရှိတဲ့ အစက်တွေကိုဘဲ ရွေးယူခြင်းဖြင့် sampling လုပ်ပြီး အရွယ် (file size) ပိုသေးငယ်တဲ့ ညာဖက်ကလို ပုံမျိုးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ high resolution ရှိတဲ့ &quot;.BMP&quot; photo picture တစ်ခုကို windows microsoft paint နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီး low resolution ရှိတဲ့ &quot;.JPEG&quot; picture တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်သိမ်းဆည်း (Save As JPEG) ပြီး ရရှိလာတဲ့ ပုံလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အရမ်း အရေးကြီးပြီး မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာလဲ ဆိုတော့ ဘာဖြစ်လို့များ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ signal processing စာအုပ်တိုင်း လိုလိုမှာ Lena ပုံကို ဥပမာ ပေးတတ်ကြတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါဘဲ။ :4: အဲ့ဒီ Lena (Lenna) ရဲ့ပုံပြင်ကတော့ ဒီလိုပါ။ 1970 လောက်တုန်းက University of Southern California (USC) မှာ professor နဲ့ကျောင်းသား တစ်အုပ် signal processing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ signal processing effect ကို နမူနာ ပြဖို့ ဆိုပြီး သူတို့အခန်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံ လိုက်ရှာကြပါသတဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ပုံပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရှိပေမယ်လို့သုံးပြီးသားတွေကို ထပ်တလဲလဲ မသုံးချင်တာနဲ့ပုံအသစ်ကို လိုက်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကံအားလျော်စွာ အဲ့ဒီ အချိန်မှာဘဲ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က playboy magazine တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး အခန်းထဲကို ၀င်လာပါလေရောဗျာ။ အဲ့ဒီ playboy magazine ထဲက Lena ရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ပုံကိုလဲ မြင်ရော ဘာပြောကောင်းမလဲ professor နဲ့အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားတစ်အုပ် အဲ့ဒီ Lena ပုံကို ခေါင်း ကနေဖြတ်ပြီး သူတို့signal processing ဆွေးနွေး သရုပ်ပြပွဲမှာ ထည့်သုံးလိုက်ပါလေရော။ အဲ့ဒီကနေစပြီး Lena ပုံကို ဟာသ တစ်ခုအနေနဲ့signal processing စာအုပ်တိုင်းလိုလို မှာ ထည့်ကြပါလေရော။ MEF က အင်ဂျင်နီယာကြီး တွေလည်း Lena ရဲ naked ပုံကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဟဲဟဲ ဒီမှာ မတင်ပြ တော့ပါဘူး။ :4: :4: အင်တာနက်မှာသာ ရှာကြည့် ကြပေတော့ဗျာ။ :4:
အပေါ်က Anatomy အပိုင်းက အဲ့ဒီမှာ ဘဲ ခဏရပ်ပြီး signal processing အပိုင်း ကို ဆက်သွားရအောင်
အဲ့ဒီလို signal တွေကို sampling လုပ်တဲ့ နေရာမှာ matlab တို့c++ တို့ လိုမျိုး programming တွေ က အသုံးဝင်လာပါတယ်။
ဥပမာ ဒီ အပေါ်က ပုံထဲကလိုဘဲ sin wave တစ်ခုကို sampling လုပ် ချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီ signal ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အမှတ် (t=1,2,3….etc) တွေမှာဘဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဥပမာ matlab, c++ မှာ ဒီလိုမျိုး programming code ရေးလို့ ရပါတယ်။
k[n] = sin(2 * pi * n / 15);
သဘောကတော့ ၁ ကနေ ၁၅ (total time period of the signal) အတွင်း ၁ မှတ်တိုးတိုင်း အဲ့ဒီ အမှတ်မှာ ရှိတဲ့ sin wave ရဲ့data point (amplitude) ကို k[n] array ထဲမှာ သွားသိမ်းပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ k[n] array ထဲမှာ ရရှိသိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဂဏန်း တွေက ရိုးရိုးသာမာန် ဒဿမ ဂဏာန်း (floating numbers) တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို မှ ကွန်ပြူတာ နားလည်နိုင်တဲ့ binary integer number တွေ အဖြစ်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်ပြီးတော့ computer memory မှာ data တွေကို သိမ်းဆည်း နေရာချ တာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ hexadecimal number တန်ဖိုးက အစဉ်လိုက်01234567 89A B C D E F ရှိပါတယ်။ ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်တို့ကွန်ပြူတာ ရဲ့memory က 8-bit 256 (decimal number0to 255) or (hexadecimal 0x00 to 0xFF) ရှိတယ် ဆိုပါစို့့။ သဘောက memory မှာ နေရာ အံခွက်လေးပေါင်း 256 ခုရှိတယ်ဆိုရင် address 0x00 က အံခွက် ၁ ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး 0x01 က အံခွက် ၂ …..နောက်ဆုံး 0xFF က နောက်ဆုံး အံခွက် 255 ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က အပေါ်မှာ sampling လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ k[n] ထဲက floating value တွေကို အဲ့ဒီ computer memory ရဲ့အံခွက်တွေထဲမှာ ထည့်သိမ်းချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို ထည့်သိမ်းဖို့ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာ နားလည် တဲ့ binary integer number 01 အနေနဲ့သိမ်းရပါမယ်။ အဲ့ဒီတော့ အပေါ်က floating number ကို binary number ပြောင်းဖို့အတွက် programming code ရေးရပါမယ်။
ဥပမာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့k[n] array ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ floating value တွေက -1.0V ကနေ +1.0V အတွင်း ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ -1.0 to +1.0 အတွင်း ရှိတဲ့ number တွေကို 0x00 to 0xFF ရှိတဲ့ 255 ကွက်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုများ နေရာချနိုင်မလဲ??
unsigned int decNum;
for(n=0; n&lt;=15; n++)
decNum[n] = ((k[n] / 2) + 0.5) * 0xFF;
သဘောကတော့ k[n] ထဲမှာရှိတဲ့ floating number တစ်ခုချင်းစီကို binary ပြောင်းချင်တဲ့ အတွက်2နဲ့စားတာဖြစ်ပြီး။ အောက်ဆုံးက အနည်းဆုံး တန်ဖိုးက 0V ကနေစတာမဟုတ်ဘဲ -1.0V ကနေစတာဖြစ်တဲ့ အတွက် 0.5 ထည့်ပေါင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်တော့မှ ရလာတဲ့ တန်ဖိုး က အမြဲ0to 1.0 ကြားထဲမှာ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ တန်ဖိုးကိုမှ 0x00 to 0xFF ဒါမှမဟုတ်0to 255 ကြားထဲမှာ နေရာ ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် အမြင့်ဆုံး 0xFF ဒါမှမဟုတ် 255 နဲ့ မြှောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ၂ ခု ၃ ခု လောက်လုပ်ကြည်ရအောင်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့အပေါ်က sin wave ကနေ sample လုပ်လို့ ရတဲ့ k[n] array ထဲက floating value တန်ဖိုး တစ်ခုက +0.7V ဆိုပါဆို့ ။
+0.7V =&gt; (0.7 / 2) + 0.5 = 0.85 =&gt; 0.85 * 255 (or) 0.85 * 0xFF = 216.75 ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို မှ unsigned integer variable decNum[n] ထဲမှာ သိမ်းလိုက်တဲ့ အတွက် floating number 216.75 ကနေ integer number 216 (11011000) အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲပြီး သိမ်းသွားပါတယ်။ ဒါဆို အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံလိုဘဲ အမြင့်ဆုံး voltage value က 0xFF မှာ နေရာ ယူပြီး အနိမ့်ဆုံး value က 0x00 နေရာမှာ နေရာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
For example: -1.0V =&gt; ((-1.0/2)+0.5)*255 =0(00000000)
For example: +1.0 =&gt; ((1.0/2)+0.5)*255 = 255 (11111111)
For example: -0.7 =&gt; ((-0.7/2)+0.5)*255 = 38.25 =&gt; integer 38 = (00100110)
အဲ့ဒီ နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့sampling လုပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ wave signal ရဲ့floating values တွေကို ကွန်ပြူတာ နားလည်နိုင်တဲ့ binary 01 တွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြီး ကွန်ပြူတာ memory ထဲမှာ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကွန်ပြူတာ ပေါ်မှာ software တွေ သုံးပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင် သလိုမျိုး signal တွေ ပြန်တည်ဆောက်ပြီး process လုပ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော် အာဝါတီး ရိုက်တာ ဒီနေရာမှာ ဘဲ ခဏရပ်ထား ပြီးတော့
signal processing / digital signal processing အကြောင်း နားလည် တတ်ကျွမ်း တဲ့ forum က အကိုအမ တွေကို ၀င်ရောက် ဆွေးနွေး ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီအောက်က ဟာတွေက ကျောင်းတွေမှာ သင်တဲ့ signal processing အခြေခံ သီအိုရီ တချို့ပါ။ time shifting, time scaling, frequency scaling, convolution, correlation etc. ဘယ်ဖက်က ပုံက continuous signal ဖြစ်ပြီး ညာဖက်က ပုံက discrete signal ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုယှဉ်ပြထားတာပါ။ ဒီ အောက် က ပုံက ရိုးရိုး သာမာန် continuous signal x(t) and discrete signal x[n] လို့သဘောထားပါ။ သူတို့ကို signal processing လုပ်ရင် အောက်က ပုံတွေထဲကလို မျိုး ရပါတယ်။
အပေါ်က ပုံ ထဲမှာ နဂိုမူလ x(t) နဲ့x[n] ကို time shifting နည်း သုံးထားတဲ့ အတွက် x(t) ကနေ x(t-2) ဖြစ်လာပြီး x[n] ကနေ x[n-2] ဖြစ်နေပါတယ်။
signal စသွားတဲ့ အချိန်ကို နှေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။
ဥပမာ ပဲ့တင်သံ လိုမျိုးပေါ့။ ရိုးရိုး သာမာန် ကြားနေရတဲ့ အသံမှာ ကိုယ့်နားထဲ ၀င်လာတဲ့ အချိန်ကို နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ အတွက် အသံက အဝေး ကနေ လာသလို ကြားရပြီး ပဲ့တင်သံ လိုမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီ အပေါ်က x(2t), x(t/2) နဲ့x[2n] ကတော့ နဂို မူလ x(t) နဲ့x[n] ကို ချုံ့ / ချဲ့လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ time scaling လို့ ခေါ်ပါတယ်။ x(2t) နဲ့x[2n] က နဂို မူလ signal တွေကို ချုံ့လိုက်တာပါ။ နဂိုမူလ signal ရဲ့duration က4(t=0 to 4) ရှိတာကို ၂ ဆ ချုံ့လိုက်တဲ့ အတွက် signal duration က x(2t) နဲ့x[2n] လိုမျိုး2(t=0 to 2) ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဥပမာ တိတ်ခွေ နဲ့ကတ်ဆက်အဟောင်းတွေမှာ မော်တာကြိုး တင်းလို့ထွက်လာတဲ့ အသံမျိုးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် DJ disc ကို လက်နဲ့ဆွဲပွတ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ အသံမျိုးပေါ့။ နဂိုမူလထက် signal တစ်ခုလုံး ကို အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံမျိုးပေါ့။ x(t/2) ကျတော့ နဂိုမူလ signal ကို duration ချဲ့လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဥပမာ ကတ်ဆက် မော်တာကြိုး ချောင်လို့ ထွက်လာတဲ့ အသံမျိုး။ DJ disc ကို လက်နဲ့ဆွဲပြီး မှေးမှေးလေး ထိန်းထားလိုက်တဲ့ အသံမျိုးပေါ့။ နဂိုမူလ ကြားနေရတဲ့ signal အသံ တစ်ခုကို ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့ အသံမျိုးပါ။ လူတစ်ယောက်က ရေ ဇလုံထဲ ခေါင်းနှစ်ပြီး ရေအောက်ကနေ စကားပြောတာကို ရေပေါ်က လူက နားထောင်တဲ့ အခါ သိပ်သည်းမှု ထူတဲ့ ရေကို ဖြတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ခပ်လေးလေး ဆွဲငင်ငင် အသံလိုမျိုးပေါ့။ ဒီအောက်က x(-t) နဲ့x[-n] ကတော့ time reversal property. သူ့အတွက် ဥပမာ ကတော့ လွယ်လွယ် စဉ်းစားလို့မရဘူး။ :) space domain ထဲမှာဆိုရင်တော့ ဥပမာ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုကို photo shop ထဲမှာ ပြင်ပြီး မှန်ထဲမှာ ပြန်မြင်ရတဲ့ mirror image effect လိုမျိုး လို့ မြင်လို့ ရပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာတွေက signal တစ်ခုကို time domain ထဲမှာ ပြင်တာပါ။ တကယ်လို့ သာ အဲ့ဒီ signal တွေကို frequency domain ထဲမှာ ပြင်မယ်ဆိုရင် သူတို့sound effect က တစ်မျိုး ဖြစ်မှာပေါ့။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေကိုဘဲ frequency domain ထဲမှာ မြင်ရတဲ့ ပုံတွေလို့သဘောထားပြီး ပြောပါမယ်။ တကယ့် triangular wave ရဲ့fourier transform ကတော့ ဒီအောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေလိုမျိုး မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဥပမာ အနေနဲ့ပြောတာပါ။ ဒီအောက်က ပုံထဲမှာပြထားတာက frequency scaling ပုံပါ။ pitch shifting လိုလဲခေါ်ပါတယ်။ မူရင်း အသံရဲ့frequency ကို ချုံ့ / ချဲ့လိုက်တဲ့ အတွက် မူရင် အသံပျောက်ပြီး ဥပမာ လူကြီး အသံကနေ ကလေး အသံ လို ဖြစ်သွားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ယောကျာ်း အသံကနေ မိန်းမ အသံ ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့။ Alvin and the Chipmunks ရုပ်ရှင်ထဲက chipmunks လေးတွေ အသံက အဲ့ဒီလိုမျိုး pitch shifting လုပ်ပြီး ရထားတာပါ။ Akon ရဲ့Lonely MTV သီချင်း အစပိုင်းလေးမှာ Lonely…I am so lonely…I have no body… ဆိုပြီး ညောင်နာနာ ကလေး အသံလေး လိုမျိုးပေါ့။ pitch shifting (frequency scaling) နဲ့frequency shifting ကနှစ်ခုစလုံးက frequency ကို ပြောင်းတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် pitch shifting မှာက signal တစ်ခုလုံး ရဲ့frequency ကို (frequency x 2) စကေး နဲ့ပြင်တဲ့ အတွက် သီချင်းသံ ရဲ့harmony ပျက်မသွားဘဲ နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ frequency shifting ကျတော့ နောက်ဆုံး က ပုံ ထဲမှာလိုမျိုး signal တစ်ခုလုံးရဲ့frequency ကို (frequency + 2) နေရာရွေ့လိုက်တဲ့အတွက် သီချင်းရဲ့harmony ပျက်သွားပါတယ်။ တချို့သီချင်းတွေမှာ instrumental effect တို metallic sound effect တို့ က frequency shifting လုပ်ပြီး ရလာတာတွေပါ။ frequency shifting/scaling တွေကို keyboard တွေမှာပါတဲ့ synthesizer တွေမှာ သုံးတာများပါတယ်။ ဥပမာ piano အသံကနေ flute အသံပြောင်းတာမျိုး guitar အသံကနေ violin အသံပြောင်းတာမျိုးပေါ့။
ကိုညီညီ ရှင်းပြနေတာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ခဏလေးကြားဖြတ်ဝင်ဖေါလိုက်ပါဦးမယ်။
ဒီအောက်က x(-t) နဲ့x[-n] ကတော့ time reversal property. သူ့အတွက် ဥပမာ ကတော့ လွယ်လွယ် စဉ်းစားလို့မရဘူး။ :) s
အဲဒါကတော့တိတ်ခွေသို့ ဓါတ်ပြားကိုပြောင်းပြန်ဖွင့်reverse play လုပ်တာမျိုးနဲ့ တူမယ်ထင်ပါတယ်။ တခါလုပ်တာတော့ ကြားဘူးပါတယ်။ ဘယ်အခွေဘယ်သီချင်းဆိုတာမမှတ်မိတော့ ပါ။ Newwave အဖွဲ့ က Raymond Htun Wai (အခု Australia)2measures လောက်ကို တိတ်ခွေကို ပြောင်းပြန် တပ်ပြီး guitar solo အသံသွင်းခဲ့ဘူးပါတယ်။
pitch shifting နဲ့frequency shifting နဲနဲလေး မေးပါရစေ။ pitch shifting ကတော့keyboard တွေ karaoke machine တွေမှာပါတဲ့Transpose function နဲ့ တူမယ်ထင်ပါတယ်။ frequency shifting က wave form ကို ပြောင်းတာ ဆိုလိုပါသလား phase ပြောင်းတာဆိုလိုပါသလား။
metal effect တွေက phase shift လုပ်ရင် ရတတ်ပါတယ်။ piano ကနေ flute ပြောင်းဖို့ က waveform ကိုပြောင်းရပါမယ်။ piano ကများသေားအားဖြင့် pluse-width waveform ဖြစ်ပြီး flute လို woodwind instrument က pulse wave form ဖြစ်ပါတယ်။ ဂစ်တာနဲ့တယော ၂ ခုလုံးရဲ့အခြေခံ waveform က sawtooth ဖြစ်လေတော့filter (low pass, high pass and resonance) နဲ့wave envelope parameter (attack, decay, sustain, release) တို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ဂစ်တာ က တယောသံပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
Time reversal effect က ကို Andrew Sway ပြောသလို ဓါတ်ပြားကို ပြောင်းပြန် ပြန်ဖွင့်တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒါကို မစဉ်းစားမိဘူး။ ကို Andrew Sway ပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ Pitch shifting ဆိုတာ Transpose ပြောင်းတာ နဲ့အတူတူပါဘဲ။ Transpose ပြောင်းတယ်ဆိုတာ key ပြောင်းတာဘဲမဟုတ်လား။ ဥပမာ C key ကနေ B key ကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ ရဲ့fundamental (harmonic) frequency ကို အချိုးလိုက် လိုက်ပြောင်းသွားတဲ့ အတွက် harmony မပျက်သွားဘူး။ အဲ့ဒီ သဘောမျိုး လို့ထင်ပါတယ်။
Frequency shifting ကျတော့ wave form ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ phase ပြောင်းတယ်ဆိုတာက time domain မှာ ဥပမာ t=pi နေရာမှာရှိတဲ့ data (amplitude) ကို t=2pi နေရာကို ရွေ့ လိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် waveform ပြောင်းမသွားတဲ့ time shifting သက်သက် သာ ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။ အပေါ်က ပုံထဲမှာပြထားသလို ပေါ့။ frequency shifting ကျတော့ နဂို မူလက T=2pi period မှာ 1 cycle ရှိနေတာကို same T=2pi period အတွင်းမှာဘဲ2cycles ဖြစ်လာအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် (frequency domain) frequency ၂ ဆတိုး လာသလို waveform လည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ (time domain) time scaling သဘောနဲ့အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အပေါ်က ပုံမှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိ တဲ့ frequency shift နှစ်မျိုး ပြထားပါတယ်။ တစ်မျိုးက ညာဖက် ကပုံ လိုမျိုး frequency ၂ ဆ တိုးသွားတာပါ။ ပုံထဲမှာ ပြထားသလို harmonic ကို ထိန်း ထားတဲ့ အတွက် သူက waveform ပြောင်းသွားပေမယ့် harmony ပျက်မသွားပါဘူး။ အဲ့ဒါမျိုးကို pitch shifting လို့ကျွန်တော် မြင်တာပါ။ frequency ကို ၂ ဆ တိုးလိုက်တယ် ဆိုကတည်းက frequency scaling လုပ်တယ်လို့ခေါ်လို့ ရပါတယ်။ နောက် ဘယ်ဖက် အောက်ဆုံး ပုံ မှာလိုမျိုး frequency shift လုပ်တာကျတော့ 2pi period အတွင်းမှာဘဲ 2cycles လဲမဟုတ် 3cycles လဲမဟုတ် ကိုးလို့ ကန့် လန့်နဲ့frequency ကို ပြောင်းထားတဲ့ အတွက် harmonic ပျက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ frequency scaling (pitch shifting) လို့ ခေါ်လို့ မရတော့ ပါဘူ။ frequency shifting လို့ ဘဲ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
ကို Andrew Sway ပြောသလို metallic effect ကို phase shifting လုပ်ပြီး ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ metallic sound ကို အပေါ်က ညာဖက် အောက်ဆုံး က ပုံထဲမှာ ပြထားသလိုဘဲ signal တစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီ signal ရဲ့frequency ကို ပြောင်းပြီး ရလာတဲ့ နောက် signal အသစ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ရလာတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သဘောက frequency ပြောင်းပြီး harmonic ပျက်နေတဲ့ အသံမျိုး ဖြစ်တဲ့ အတွက် phase scaling လုပ်ပြီး harmonic ပျက်နေတဲ့ အသံ နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ယူဆလို့ ရတယ်လို့ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
Piano သံကနေ flute သံပြောင်းတာမျိုး ဂစ်တာသံကနေ violin အသံပြောင်းတာမျိုး တွေကို ကို Andrew နားလည် ရင် နဲနဲ အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါလား။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူတို့ ဘယ်လို ပြောင်းတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားမလည်လို့ပြီးတော့ keyboard တွေမှာ piano-flute-guitar-organ-violin စသဖြင့် အသံ အမျိုးမျိုး ပြောင်းတာ ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတာလည်း သိချင်လို့ ပါ။ အဲ့ဒီ musical instruments တွေရဲ့frequency range က မတူတဲ့ အတွက် signal ရဲ့frequency range ကို ရွေ့ပေးရမယ်လို့ယူဆပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်တယ်ဆိုတာကို သေချာမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့ အမြင် ကို ပြောရရင် အဲ့ဒီ ကိရိယာ တွေမှာ တပ်တဲ့ ကြိုး အရှည် အရွယ်အစား လေပြွန် အရှည် အရွယ်အစား ကိုလိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့frequency tone လိုက်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ထွက်လာတဲ့ အသံလည်း မတူတာဖြစ်မယ် လို့ယူဆပါတယ်။ လူတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လည်ချောင်း vocal tract မတူလို့မိန်းမ-ယောကျာ်း-ကလေး-လူကြီး အသံ ကွဲပြား သလိုပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ ရဲ့frequency ကို ပြောင်းခြင်းအားဖြင့် ကိရိယာ အသံ တစ်ခုကနေ နောက် အသံ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကို Andrew Sway ပြောသလို သူတို့ ရဲ့ မတူညီတဲ့ waveform/wave envelope parameter စတာတွေနဲ့အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ နိုင်ပုံကိုတော့ ကျွန်တော် သိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် က အခြေခံ သီအိုရီ လောက်ဘဲ သိတာဆိုတော့ တကယ့် လက်တွေ့ မှာ အဲ့ဒီ အသံတွေ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာကို သေချာမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့ ဆီမှာလဲ အဲ့ဒီလို အသံကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲတဲ့ software မရှိတော့ သုံးလဲ မသုံးတတ်တော့ :) နမူနာ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့အင်တာနက်မှာ နမူနာ အသံတွေ လိုက်ရှာရင်နဲ့ဒီ site လေးတွေ့ ပါတယ်။ pitch shifting နဲ့frequency shifting အသံ ဘယ်လိုရလာတယ်ဆိုတာတော့ အသေးစိတ်ရှင်းပြမထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ အသံ နမူနာ တွေတော့ တွေ့ လို့ဒီမှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လမ်းကြုံတာနဲ့ကျွန်တော်မှာ ရှိတဲ့ signal processing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ် နဲ့တွဲရက် ပုဒ်စာအဖြေ စာအုပ် ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ သုံးတဲ့ အောပန်ဟိုင် ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ပါ။ စကားဝှက် ကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း MEF ပါ။ ကို ထက်လင်းအောင် နဲ့ကို ဖိုးလပြည့် ဆောက်ထားတဲ့ library ဆိုတာတော့ တွေ့ လိုက်မိတယ်။ ဘယ်နားမှာမှန်း ရှာလို့ မရတာနဲ့ဒီမှာဘဲ လွယ်လွယ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ရှာလို့ တွေ့ မှဘဲ library မှာ တစုတစည်းတည်း ဖြစ်အောင် ပြောင်းတင်ပေးပါ့မယ်။
ကိုညီညီတင်ထားတဲ့phase shift အသံဖိုင်လေးနားထောင်ကြည့် တော့ကျနော်အပေၞကပြောခဲ့ တဲ့ filter section (low pass, high pass and resonance) က high pass filter နဲ့ resoance ကို ကစားရင်ထွက်လာတဲ့ အသံမျိုးနဲ့ တူပါတယ်။ harmonics ကို interference ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောလို့ ရမလားမသိဘူး။
piano flute string guitar အသံတွေဘယ်လို ဖန်တီးတယ်ဆိုတာကိုတော့software synthesizer တခုနဲ့ ကလိကြည့် ရင် သဘောပေါက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အဆင်ပြေမဲ့ Softsynth လိုက်ရှာနေပါတယ်။ တွေ့ ရင်တင်ပေးပါမယ်။ အခုတွေ့ တာက Acid တို့Cubase တို့ မှာ plugin အနေနဲ့ သုံးတဲ့ VST တွေဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာတခုပြောရ ရင် http://www.youtube.com/watch?v=uaaPTnlw0OE က ၇၀ နှောင်းပိုင်းနဲ့၈၀ ၀န်းကျင်မှာ ခေတ်စားခဲ့ တဲ့Roland Jupiter 8 ရဲ့software synth အကြောင်းပါ။
ဂီတာတူရိယာသံအမျိုးမျိုးဖန်တီး (synthesis) လုပ်တာ ခေတ်နဲ့ အလိုက်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါတယ်။ 60, 70 နဲ့80 အစောပိုင်းမှာ Analog synthesizer တွေရှိပါတယ်။ အပေၞက Jupiter 8 က analog ထဲမှာ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည် ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့Yahama SY-1 တို့Roland SH-1 1 တို့ Farfisa synthochestra တို့ ကတော့ အသံအသင့် စပ်ပြီးသား ခလုပ်ချိုးတီးယုံပါဘဲ။ သည့် နောက်(၁၉၇၇) ၀င်လာတဲ့Yamaha CS-60 Roland SH-11 တို့ ကတော့ program လုပ်လို့ ရတဲ့ တကဲ့ analog synthesizer တွေပါ။ Voltage Controlled Oscillator VCO, Voltage Controlled Filter VCF နဲ့Voltage Controlled Amplifier VCA စတဲ့ အခြေခံ synth module တွေပါတဲ့ keyboard တွေပါ။ ၇၉-၈၀ လောက်မှာတော့ Roland Jupiter series (2,4နဲ့ 8) မြန်မာပြည်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ polyphonic analog synth တွေဖြစ်တဲ့ အပြင် စပ်ထားတဲ့ အသံတွေကို သိမ်းလို့ ရတဲ့memory module တွေလည်းပါလာပါပြီ။
သည် နောက်တော့Digital synth ခေတ်စပြီပြောရမှာဘဲ။ Roland Juno-2 ကတော့digital synth ဒါပေမဲ့programming အပိုင်းမှာ ကြည့်ရင် analog အတိုင်းပါဘဲ။ သည့် နောက် ၈၃-၈၄ မှာတော့roland JX-10, D-50 နဲ့Yamaha DX-7, DX-8, DX-10 တို့ ကတော့တကဲ့digital synth အစစ်တွေလို့ ပြောရပါမယ်။ အရင် analog လို့ voltage control မဟုတ်တော့ ဘဲ FM (frequency modulation) tone generator သုံးလာပါတယ်။ carrier wave နဲ့ signal wave ၂ခုကို modulate လုပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ အခြေခံ waveform များကို generate လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီခေတ်က digital synth ကိုကြည့် ရင် algorithm က အဓိကအားဖြင် ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ Linear arithmetic နဲ့Fourier (non-linear) ပါ။ Linear arithmetic သုံးတဲ့ ဥပမာ Roland Juno series and D series ကို LA synth လို့ သမုတ်ကျပြီး Non-linear သုံးတဲ့Yamaha DX series ကို တော့ Fourier synth လို့ ခေၞပါတယ်။
၉၀ အစောပိုင်းမှာတော့ waveform synth တွေပေၞလာပါပြီ။ FM tone generator အစား အခြေခံ waveform တွေကို တကဲ့instrument တွေက sample ယူထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့algorithm အပိုင်းမှာတော့LA နဲ့ Fourier ကွဲတုန်းပါဘဲ။ Roland U series, JV series, Ensoniq ESq series, Korg M series တွေပေါ့ ။ ၉၅ နောက်ပိုင်းမှာတော့synth အားလုံးက Fourier base ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျနော်လည်း ၉၅ မတိုင်ခင်က program လုပ်ရတာလွယ်တဲ့LA synth ဘဲ တွယ်ကပ်ပြီးသုံးခဲ့ တာ။ အခုနောက်ပိုင်းက program လုပ်စရာမလို လောက်အောင်အသံတွေစုံနေပါပြီ။ အသံတူလိုခြင်ရင် ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် sample လုပ်နိုင်တဲ့ sampler module တွေလည်း keyboard တွေမှာပါလာပါပြီ။ ဥပမာ- ကျနော့မှာရှိတဲ့Korg Triiton LE နဲ့Yamaha MO6 မှာ sampler capability ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း အားလုံး Fourier ဖြစ်ကုန်တာထင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးပြသွားတဲ့ သမိုင်းက wiki တို့ ဘာတို့ မှာ ရှာရေးတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော့ အတွေ့ အကြုံအရမှတ်မိသမျှရေးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်နေတာတွေလည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုညီညီသိချင်တဲ့ တူရိယာအမျိုးမျိုးအသံပြောင်းတာ ဘယ် generation က synth နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးသိချင်ပါသလဲ။
၀ီကီ ထဲကနေ တွေ့ထားတာလေးကို လေ့လာရင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Analogue/Digital & Discrete Signal တွေနဲ့ ပတ်သတ်တာ ရှိရင် ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။
Picture ထဲမှာပြထားတာကတော့ ရှင်းသလိုလိုပါပဲ။ သလိုလို ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဘယ်လို State ကို Discrete Signal လို့ ခေါ်မလဲလို့ပေါ့.....။
ကိုညီညီခင်ဗျာ...အရမ်းကောင်းမွန်ပြီး အရမ်းအဖိုးတန်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဆက်လက်တင်ပေးကြပါဦးလို့ forum ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဗျာ
အင်း အီလက်ထရောနစ်သမားတွေ ခက်ခဲစေတဲ့မေးခွန်းတွေလိုထင်စေသလို လွယ်ကူနေသလိုလဲခံစားရပါတယ်.....အားလုံးလဲ ဇင်မောင်ပြောသလို သိုလောသိုလော ဖြစ်နေမယ်လိုထင်ပါတယ်...... discrete signal ကို နားလည်တာကတော့ အချိန်အမျိုးမျိုးအတွင်းမှာ တိုင်းတာလိုရတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုလိုထင်ပါတယ်.....(ဥပမာဗျာ ကျနော်တို့ အသုံးပြုတဲ့ freq တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတွေမှာ မိမိတိုင်းတာလိုတဲ့အချိန်ကို ပေးပြီး အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆားကစ်ရဲ့ freq ကို တိုင်းတာလိုရတာမျိုးပေါ့...) အခု discrete ကတော့ မိမိဘာသာ အချိန်တွေကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အဲဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်....Digital signal ကတော့ time တစ်ခုအတွင်းမှာ တန်းဖိုးကတော့ high and low value နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ်.....အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဘယ်လို state ကို Discrete signal လို ခေါ်မလဲဆိုတော့ အောက်ဆုံးပုံနှစ်ခုစလုံးကို Discrete signal လိုခေါ်သည်ပေါ့ ကိုဇင်မောင်ရေ...... မိမိဖတ်ပြီးနားလည်သလို ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.......
ခြုံငုံပြီး အကြမ်းဖျဉ်းလေ့လာတာက ပိုသဘောပေါက်ဖို့လွယ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Discrete data ဆိုတာမျိုးက အရေအတွက်တန်ဖိုးတိတိကျကျကို သိသာထင်မြင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Discrete signal ဆိုတော့လည်း အဲဒီလို တိကျတဲ့ အချက်အလက်များ ပေးနေတဲ့ Signal အမျိုးအစားလို့ပဲမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာပြောရလျှင် ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေ သုံးပြီး အခကြေးငွေကောက်ခံတဲ့ ကားပတ်ကင်စနစ်တစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၁) စောင့်ကြည့်နေတဲ့ စနစ်အတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကားအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းဟာ Discrete data အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
၂) အဲဒီအထဲက ကားတစ်စင်း ပါကင်အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလကိုစဉ်းစားလျှင် တိကြပြတ်သားဖို့နည်းနည်းခက်ခဲသွားပါတယ်။ စတင်ဝင်ရောက်ချိန်ကို လည်း စနစ်က မှတ်သားတယ်၊ ပြန်ထွက်ချိန်ကိုလည်းစနစ်က မှတ်သားတယ်၊ အဲဒီတော့ တွက်ချက်မှုအဆင့်ပြီးလျှင် တိကျတဲ့အချိန်ရပြီမဟုတ်လားလို့ အလွယ်တွေးနိုင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် စနစ်က အချိန်ကို အသေးစိတ်လိုက်ယူတယ်ဆိုတောင် တစ်စက္ကန့်ရဲ့ အပုံတစ်ရာပုံပုံလျှင် တစ်ပုံတန်ဘိုးကွဲလွဲမှုလောက်အထိ သူတို့လိုက်မမှတ်ကြပါဘူး။) အဲဒီတော့ ဒေတာအဖြစ်မှတ်ယူသွားတဲ့ အချိန်တန်ဘိုးဟာ ပကတိအချိန်တန်ဘိုးနဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏတစ်ခုအထိ အမြဲလိုလိုလွဲနေနိုင်ပါတယ်။ (အလွယ်ပြောရလျှင် ကားကိုရေတွက်တာလောက်တော့ မတိကျဘူးဆိုရပါမယ်။)
၃) အချိန်ကို ပကတိအနေအထားအထိ အရမ်းကြီးတိကျအောင် မမှတ်သားနိုင်ပေမယ်လို့ ငွေကောက်ခံတော့ နာရီဝက်အပိုင်းအခြားကာလကို ဘယ်လောက်၊ တစ်နာရီဆိုဘယ်လောက်နှုန်း စတာမျိုးတွေနဲ့ ကောက်ခံတတ်ကြပါတယ်။ (ကားနံပတ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားရှိခဲ့လျှင်) ကားကြီးကားသေး၊ အသင်းဝင်အဆင့်စတာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီး လျှော့ဈေးပေးတာ၊ အစောပိုင်းကာလတစ်ခုကို အခမဲ့သုံးခွင့်ပြုတာမျိုး ရှိတတ်ပေမယ့် စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေတွက်ဖို့ကြတော့ အပိုင်းအခြားယူနစ်ပေါင်း ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကြာခဲ့တယ်ကိုပဲ ရေတွက်ကာ တွက်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ယူနစ်ပမာဏတွေဟာ အချိန်တန်ဖိုးလို နာရီ မိနစ် စက္ကန့်တွေ အထိတိတိကျကျ မယူတော့ပဲ တစ်ယူနစ်ကျော်တာနဲ့ နှစ်ယူနစ်ဖိုးကောက်မှာဖြစ်လို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်တန်ဖိုးတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီအခြေခံသဘောကို လက်ခံသဘောပေါက်လျှင် အထက်ကပုံတွေကို တစ်ဖန်ပြန်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ပုံတွေက ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဆွဲထားရာရောက်ပြီး လိုအပ်ချက် မပြည့်စုံပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အလျားလိုက် ညာဖက်ကို ရွေ့သွားလျှင် အချိန်ပိုပို ကြာမြင့်လာတာလို့ထင်ပါတယ်။
၁) ပထမဆုံးပုံမှာ အချိန်ကြာလျှင် အမြင့်ပြောင်းတာတော့ သိနိုင်ပြီး အချိန်ကိုလည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်သလို အမြင့်တန်ဘိုးကလည်း ကိန်းပြည့်မရနိုင်ပဲ ဆယ်လီစိတ်၊ ရာလီစိတ် ကိန်းတွေအဖြစ် အနိမ့်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးတန်ဘိုးအကြား အမြဲ (အဆက်မပြတ်)ပြောင်းလဲရနေမှာပါ။
၂) ဒုတိယပုံက အချိန်ဘယ်လောက်အကြာမှာ တစ်ခါ အမြင့်ကို ဖတ်ယူမှတ်သားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ အမြင့်ဖတ်ရာမှာ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နီးစပ်မှန်ကန်အောင်ဖတ်ယူပါတယ်။
၃) တတိယပုံကျတော့ အမြင့်ကို ယူနစ်ဘယ်လောက် ပြည့်မီသလဲပဲ ရေတွက်ပါတယ်။ အတိအကျမဖတ်တော့ပါဘူး။ (မြင်လွယ်မည့် ဥပမာတစ်ခုပေးရလျှင် ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ ၂၄နာရီလည်ပတ်တဲ့စက်ရုံတစ်ခုက လေးနာရီပြည့်တိုင်း ရေသန့် ပါကင်ပုံး ဘယ်လောက် ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သလဲ မှတ်တမ်းကောက်ယူ စာရင်းသွင်းတယ်ဆိုပါတော့။ ထုပ်ပိုးမပြီးသေးတဲ့ လုပ်လက်စ ပါကင်ပုံးတွေဟာ စာရင်းထဲဝင်မသွားပါဘူး။) စာရင်းထဲဝင်သွားနိုင်တဲ့ အဲဒီအရေအတွက်ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆစ်ဂနယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။